Yenza Amanani Wentengo Nokuqhathanisa Njenge-Ninja | Martech Zone
NgoLwesithathu, Okthoba 23, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Izolo ebusuku ngakhe igridi yamanani ku-plugin entsha esethula yona eguqukayo WordPress ibe yesikhulumi imeyili Marketing, CircuPress. Kwakungemnandi neze ukwakha (ngangisebenzisa Intengo yamahhala negridi yokuqhathanisa ye-DreamCode amasampula) futhi zisadinga ukuguqulwa ngokuqhubekayo ukuqinisekisa ukuthi ziyaphendula kuzikrini zamaselula namathebulethi.
Uma ufuna indlela elula yokwakha amatafula wokuqhathanisa kanye namagridi entengo, hlola Qhathanisa uNinja futhi Intengo Ninja. Yomibili le minikelo iza nezifanekiso ezithile ezijwayelekile ezizokusiza ukuthi ukhiphe ukwakha amagridi amahle ngemizuzu.
Le yisevisi ebanjelwe, ngakho-ke awuyakhi igridi bese ukopisha / unamathisela ikhodi yakho. Usebenzisa isifinyezo sekhodi osinamathisela ku-HTML yakho (noma i-ID yetafula exhunywe kufayela le- I-WordPress shortcode nge-Plugin) ukubonisa igridi yakho kusayithi lakho lokuya khona.
Inzuzo ye Qhathanisa uNinja futhi Intengo Ninja yijubane ongakhipha ngalo ama-grids amahle. Kumele kuqashelwe ukuthi kunemikhawulo kulokho ongakwenza isitayela ngokusebenzisa i-interface yomsebenzisi. Ekugcineni, angisebenzisanga insizakalo ngoba bengidinga ukulandela iphalethi lemibala elifana nesayithi. Futhi-ke, uma isivinini nokuzinza kungukhiye, kuya ngesayithi lomuntu wesithathu ukubonisa okuqukethwe kwakho kungenzeka noma kungabi yinto ofisa ukuyenza.
Tags: qhathanisa i-ninjaigridi yokuqhathanisaithebula lokufanisaintengo ninjaigridi yamananiitafula lamanani entengo